Ny fampiharana Audio Recorder dia tonga ao amin'ny Mac App Store | Avy amin'ny mac aho
Tonga ao amin'ny Mac App Store ny fampiharana Audio Recorder
Iray amin'ireo mpampiasa manangona tahirin-tsoratra na naoty tsy tapaka ao amin'ny Mac ve ianao? Raha toa ianao ka karazan'ity mpampiasa ity dia mety aminao ilay rindranasa vao tonga tao amin'ny Mac App Store ary ahafahantsika manoratra naoty amin'ny fomba tena tsotra sy mahomby. Ny Audio Recorder dia manana fahaizana hita ao amin'ny bara fampiharana an'ny Mac mba hahafahantsika manao izany haingana, mora sy mandaitra fotsiny rehefa mila mitahiry raki-peo misy naoty isika. Maimaimpoana koa ny fampiharana ary afaka mandray an-tsoratra betsaka araka izay ilaintsika isika.
Tsotra tokoa ny fandidiana ary rehefa avy nisintona ilay rindranasa izahay dia manokatra azy ary mametraka ny kisary ao amin'ny bara fampiharana. Vonona izahay hanatanteraka ny firaketana voalohany ataonay ary amin'ny fipihana tsara dia hiseho ireo safidy misy, ao anatin'izany ny Prefers amin'ny fampiharana ary ny safidy handraisana feo am-peo.
Izao ihany no misy tsindrio ny rakipeo ary hanomboka kaonty amin'ny mena izany amin'ny fotoana naha-teo antsika, azontsika atao ny miato ny firaketana na vantany vao vitantsika izany, kitiho ny fijanonana ary dia izay. Ireo feo naoty Azontsika atao ny mitahiry azy ireo amin'izay toerana tiantsika sy mampiasa ny mp3 na aif format.
Ny fahamoran'ny fampiasana sy ny kalitao an-tsoratra ny raki-peo Hiankina amin'ny micro an'ny Mac antsika sy ny tontolo iainantsika io, fa amin'ny ankapobeny ny fampiharana dia tena ilaina amin'ny toe-javatra sasany izay tsy maintsy anoratantsika zavatra ary tsy afaka na ho an'ireo mpampiasa zatra an'ity karazana firaketana ity izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Tonga ao amin'ny Mac App Store ny fampiharana Audio Recorder
Apple dia manolotra antsika ny mpanonta Ultimaker 3+ 2D amin'ny tranokalany manokana
Betas bye herinandro ho an'ny OS X sy macOS